Taliska AMISOM oo ka hadlay gaari ay leeyihiin oo haweeney waayeel ah ku jiiray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliska AMISOM oo ka hadlay gaari ay leeyihiin oo haweeney waayeel ah ku jiiray magaalada Muqdisho
War-qoraal ah oo maanta lagu soo daabacay websiteka taliska howlgalka AMISOM islamarkaana uu ku saxiixnaa afhayeenka AMISOM Joe Kibet ayaa lagu sheegay inay baaritaan ku wadaan shilka maalintii Khamiista ahayd ka dhacay inta u dhaxeeysa wadada KM4 iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Shilkaasi ayaa ahaa haweeney Soomaaliyeed oo waayeel ahayd oo ay ciidanka AMISOM gaarigooda ku jiireen islamarkaana isla goobtaasi ku geeriyootay.
Haweeneydaasi ayaa la sheegayaa inta aaan la jiirin kahor inay isku dayday inay ka dhex gudubto kolonyadii gaadiidka ay la socodeen ciidanka AMISOM ee maraayay isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho balse ay si kedis ah ku jiireen haweeneydaas.
Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in nasiib-xumo ay ku geeriyootay haweeneydaasi oo gaariga AMISOM jiiray, sida ay xaqiijiyeen xarunta booliska taraafikdda gobalka Banaadir.
Dhinca kale, ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika ugu qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay shilkaasi, isagoona tacsi u diray qoyska marxuumadda ku geeriyootay shilkaasi.
Si kastaba, maalintii Khamiista ayay ahayd markii kolonyo ay la socdeen ciidanka AMISOM ay si arxan darro ah gaarigooda ugu jiireen haweeney waayeel ah oo rabtay inay gooyso jidka, iyagoona kadib isla goobta ugu dhaqaaqay kadib markii ay gaarigooda ku jiireen.